Isifo somlenze obomvu ezinjeni | Izinja Umhlaba
Izilwane ezifuywayo ziyilungu lomndeni ngakho-ke, kudinga ukunakekelwa okukhulu. Lokhu kusho ukugcina unolwazi ngezenzo umzimba wakho ongaziveza ngesikhathi esithile, ngoba ziyizidalwa ezidinga ukunakekelwa nokunakekelwa, ezinye ngaphezu kwezinye, kepha ekugcineni kuhlale kunezinga lokunakekelwa okujwayelekile.
Okwamanje, izinja zingenye yezilwane ezifuywayo ezithandwa kakhulu ngabantu futhi yingakho singabathola emakhaya amaningi namuhla.
1 Ziyini izimpawu nezimbangela zayo?
1.2 Xhumana nemikhiqizo ecasulayo
1.3 Ukungezwani kokudla
2 Ungayiphatha Kanjani Izinja Ezibomvu Zenja Ngokwesizathu Sazo
2.1 Ukwelashwa kwezinyawo ezibomvu ngesikhunta
2.2 Ukwelashwa kwama-irritants
2.3 Ukwelashwa kokungezwani komzimba nokudla
2.4 Ukwelashwa kwezinyawo ezibomvu ezilumayo
3 Ezinye izimbangela ezingadala imilenze ebomvu ezinjeni nasekwelashweni kwazo
3.2 Ukulimala kwamapads
Ziyini izimpawu nezimbangela zayo?
Kunezinkomba eziningi ezivame ukusixwayisa ngokuhlupheka kwesifo esithile ezinjeni zethu, ngakho-ke namuhla besifuna ukukutshela ngesinye sezifo ezinelukuluku kakhulu, okuthiwa imilenze ebomvu.
Kuyaziwa ukuthi izinja zivame ukuhlupheka ezindaweni ezithile zomzimba wazo, kanye nezinkinga ezithile esikhunjeni sazo, noma kunjalo, lezi zinkinga akuvamisile ukuba yinkinga enkulu kuzo. okuthile futhi okuphathelene nohlanga nemvelo lapho kutholakala khona.
Ingabe inja yakho inethoni ebomvu kuzidladla zayo? Lokhu kungahlotshaniswa nezizathu ezahlukahlukene, lapha siveza okunye okuvame kakhulu:
I-Las imvubelo izifo Zingaba esinye sezizathu eziyinhloko zokuthi kungani sizothola lolu hlobo lokuphendula ezinyaweni zenja yethu.
Ngokuvamile, inja imvamisa ikhombisa izimpawu ngokuziphatha, njengasesimweni sesikhunta, ukulunywa nokukhothwa okungapheli kwemilenze yaso, isimo esingaqhubeka ngokuya siba sibi.
Isikhunta esibhekele izifo ezaziwa ngokuthi i-candidiasis yiyona Candida albicans. Kuyinto kubalulekile ukuyisa inja yethu kudokotela wezilwane Ebhekene nalezi zinhlobo zezimo, ngoba lokhu kuzosivumela ukuthi siqiniseke ngokuhlupheka kwenja yethu, ngoba izifo zingahluka ngokuya ngefungus futhi ngukuthi zingathelela abanikazi bazo uqobo.
Xhumana nemikhiqizo ecasulayo
Ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya, izinja zivame ukuwela phansi kwazo zonke izinhlobo zezitshalo noma amakhambi, lokhu kuvame ukubachaya ku inani elikhulu lamakhemikhali ukuthi ezimweni eziningi izitshalo zivame ukusebenzisa izindlela zokuzivikela. Kungakho kujwayelekile kakhulu ukuthi uqaphele ukuthi izinja zivezwa kanjani kulesi sigaba sezinto. Kepha akuyona yonke into ewela ezindaweni zasemakhaya futhi kungenxa yokuthi izinto eziningi zokuhlanza nazo zingadala ukusabela kwalolu hlobo ezinjeni zethu.
Kuyadingeka ukugcina izinja zethu zikude nezindawo lapho kusetshenziswa lezi zinhlobo zemikhiqizo, ikakhulukazi uma umhlabathi usemanzi. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi indawo yomile ngokuphelele futhi silungele inja yethu ukuzungeza ngayo.
Njengabantu, izinja nazo zingaba nokungezwani komzimba umkhiqizo wokudla okuthile.
Amaprotheni imvamisa angomunye wababandakanyeka kakhulu kulolu daba, ikakhulukazi inkukhu, ngakho-ke okungcono kakhulu esingakwenza ukuyisa inja yethu kudokotela wezilwane ukwenza izivivinyo ezihambisanayo.
Ukulimala kungadala ukuthi inja yethu iklabe isikhathi eside, kuze kube seqophelweni lokuthi thola ukudala ukucasuka kuleyo ndawo. Kubalulekile ukulandela umkhondo walezi zinhlobo zamanxeba kuwo, ugweme ngangokunokwenzeka isidingo sokuziklwebha ngokwawo.
I-Las ukulunywa yizinambuzane Zijwayele ukuholela kulolu hlobo lwesimo, ezinye izitshalo kanye nemikhiqizo ekhona emhlabathini efana nengilazi ephukile noma izintambo. Njengakuzo zonke izimo, udokotela wezilwane uzokwazi ukuthi angaphendula kanjani kulesi simo, asebenzise ukwelashwa okufanele kakhulu njengoba kungaba njalo.
Phakathi kwamathuba amaningi kangaka Kubalulekile futhi kuzobaluleka ukugcina inja yethu ngaphansi kokunakekelwa okudingekayo. Ukuvakashela kudokotela wezilwane kufanele kube njalo, ikakhulukazi uma inja yethu ivezwa yilolu hlobo lwezinto nsuku zonke ekhaya.
Ungayiphatha Kanjani Izinja Ezibomvu Zenja Ngokwesizathu Sazo
Njengoba unangaphambili, kunezimbangela eziningana zokuthi kungani inja ingaba nemilenze ebomvu. Ezinye zazo zilula ukwelashwa, kepha ezinye zidinga ukuvakashelwa udokotela wezilwane. Ngalo mqondo, sifuna ukukunika umbono wokuthi kungaba yini ukwelashwa okufanele kwenziwe ukunciphisa inkinga nokungaphatheki kahle okubangelwa yimilenze ebomvu enjeni yakho.
Ukwelashwa kwezinyawo ezibomvu ngesikhunta
Lapho kukhona ukutheleleka kwefungal ezinyaweni, futhi kubangela izinyawo ezibomvu, ukwelashwa kufana kakhulu nokwabantu. Lokho wukuthi, sikhuluma ngakho sebenzisa imikhiqizo elwa nesikhunta. Kuzoba ngudokotela wezilwane ongabanikeza umkhiqizo ongcono kakhulu kubo ngoba imikhiqizo esiyisebenzisayo ayihlali ibalungele kakhulu abangane bethu abanoboya.
Njengoba sichazile, kunemikhiqizo engacasula inja yakho, futhi okunye ukuphendula isikhumba sakhe okukuyo ukuvuvukala kubonakale umbala obomvu. Kodwa-ke, akukhona nje kuphela ngenxa yamakhemikhali acasulayo, kungenzeka futhi ngezitshalo ngokwemvelo.
yini okufanele uyenze uma kunjalo? Into yokuqala okufanele uyenze ukugeza indawo kahle kakhulu ngensipho namanzi. Akukho okunye. Uma usukwenzile, ukucasuka kufanele kudlule ngokuhamba kwesikhathi. Kepha kwesinye isikhathi inkinga iyaqhubeka bese udinga ukwelashwa okuthile kwale mikhiqizo.
Isibonelo, ake ucabange ukuthi ubusendaweni yezimbabazane, ngakho-ke, imilenze yakho isibomvu, iyavuvukala futhi iyanwaya, iyavuvukala, njll. Ukugeza nje indawo kufanele kudlule, kepha kunezinja ezibucayi ezidinga imishanguzo yokuqeda lezi zimpawu. Futhi, njengenjwayelo, sincoma ukuthi uye kudokotela wezilwane.
Ukwelashwa kokungezwani komzimba nokudla
Endabeni yokungezwani komzimba nokudla, ngokuya ngobukhulu bayo, ungadinga uhlobo oluthile lokwelashwa ukunciphisa imiphumela.
Kulesi simo, kungcono kakhulu iya kudokotela wezilwane uyofunda ngecala lakho futhi ingakunika, isibonelo, umjovo wokulwa nokungezwani komzimba, ikakhulukazi uma ingathinti imilenze kuphela, kepha ibangela ezinye izinkinga okufanele zixazululwe ngokushesha okukhulu.
Ukwelashwa kwezinyawo ezibomvu ezilumayo
Lapho imilenze ebomvu ibonakele ngenxa yokulunywa, into ejwayelekile kakhulu ukusebenzisa ukhilimu oqeda ukungakhululeki, ubuhlungu, ukuvuvukala, njll. lendawo. Manje, sincoma ukuthi umyise kudokotela wezilwane ukuze abheke ukuthi, endaweni yokulunywa, akukho okusalile, njengokulunywa yizinambuzane, noma olunye uhlobo lwento olwenza ukungakhululeki okukhulu esilwaneni (ngoba iyaqhubeka nokuhlinzeka ngobuthi obucasula leyo ndawo.
Uma usuqinisekisile ukuthi akukho lutho indawo kumele ibulawe amagciwane kahle kakhulu futhi uyiphathe ukuze inja yakho ingayithinti kakhulu. Kwezinye izikhathi kuyodingeka ukuthi kusetshenziswe ikhola ka-Elizabethan ukuze ingangeni kuleyo ndawo, noma ibhandishi lesikhashana ukuze ikhambi lisebenze.
Ezinye izimbangela ezingadala imilenze ebomvu ezinjeni nasekwelashweni kwazo
Ngaphezu kwezimbangela ezinkulu esizibonile ezingadala ukuvela kwemilenze ebomvu, kunezinye izizathu zokuthi kungani inja yakho ingakumangaza ngokuba nayo kanjena. Empeleni, ezimweni eziningi ozozibona ngezansi, inja yakho ngeke ikhululeke, ngeke ifune ukuhamba futhi izolokhu ikhotha noma ilume izidladla zayo ukuzama ukunciphisa inkinga.
Ubucabanga ukuthi inja ayikwazi ukushisa izidladla zayo? Well empeleni wena iphutha kakhulu. Ehlobo ikakhulukazi, lapho amazinga okushisa ephezulu, Ukuhambahamba nenja yakho kungaba ukuhlukunyezwa kwangempela ngoba bahamba bengafake zicathulo. Uma i-asphalt noma umgwaqo usendleleni, isilwane siyohlala sinyathela ngaso sonke isikhathi, futhi sizovutha.
Kepha lokhu akwenzeki ehlobo kuphela. Ebusika, amakhaza nawo angadala ukusha, futhi kwesinye isikhathi ayacasula futhi abe yingozi kunelanga.
Ukukunika umbono. Zama ukuhamba ungafake zicathulo lapho kuhamba inja yakho. Awukwazi ukuma? Kushe? Yilokho ophoqa inja yakho ukuthi ikwenze.
Lapho isilwane sishisa imilenze yaso, siyavuvukala sibe bomvu, ikakhulukazi indawo yamapayipi, edala ukuthi ixebuke, iblisters, futhi ikhothe indawo. Ukuyinciphisa, zama ukumanzisa imilenze ngamanzi apholile bese usebenzisa i-anti-scald ne-antibacterial product ukuze unciphise ukungakhululeki.
Izilonda zephedi nazo zingadala ukuthi izinja zibe nezinyawo ezibomvu, noma ngisho noqweqwe oluzivimbela ekushintsheni kahle. Lezi zilonda zingavela ngenxa yezimbangela ezahlukahlukene njenge ngenxa yokugqoka ngokweqile emilenzeni, ngenxa yokuzivocavoca umzimba (kungaba ukwenza okuningi noma ukwenza okuncane), imithelela ngezinto, njll.
Kulokhu, ukwelashwa kuzoya ngesizathu esiyinhloko esidale inkinga. Uma bekungenxa yokusikeka noma ngoba kukhona okubethelwe, into yokuqala ukuqinisekisa ukuthi le nto ayifakwanga emlenzeni futhi, uma kunjalo, kufanele isuswe.
Ngemuva kwalokho kufanele uyihlanze kahle indawo futhi uyibhandishe ukuzama ukuyivuselela leyo ngxenye (noma okungenani uzame ukwenza izilonda zipholise). Kunoma ikuphi, ukuvakashela kudokotela wezilwane kungasiza ukuthola ikhambi nokwelashwa okuhle kakhulu, noma usebenzisa okhilimu, ukufaka iziqu, Njll
Ekugcineni, enye inkinga inja yakho engahlupheka ehlobene nesikhumba yi-pododermatitis. Kuyindlela ye- ukuvuvukala kwephuphu okungavela phakathi kwezinzwani zakho, ngaphakathi kwezidladla, noma kuyo yonke indawo.
Kubonakala ngokuguqula umlenze ube bomvu futhi kungaba ngenxa yezimbangela eziningi ezenza ukuthi isikhumba kuleyo ndawo sicasuke futhi sisabele. Phakathi kwabo, into ejwayelekile ukuthi kukhona ukungezwani komzimba, izinambuzane, amazenzeizibungu, njll. Kodwa kungabandakanya nezinkinga ze-endocrine, njengokungasebenzi kahle kwe-thyroid, i-cyst, noma ukuthi amasosha akho omzimba ahluleka.
Khumbula ukuthi akukubi neze ukuvikela imilenze yenja yethu ngamafutha athile akhethekile lokho futhi ondle futhi unike amanzi amapayipi akho.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izifo » Isifo somlenze obomvu ezinjeni
Igama lami nginguMaria nenja yami eneminyaka ewu-11 namuhla ngimbone ebomvu phakathi kweminwe, kungaba ukuluma, uphethwe yisikhumba esingamfaka kuso Ngiyabonga.